Ogaden News Agency (ONA) – Wadan Belgium oo Ugacan Galiyay Wadanka Faransiiska Saalax Cabdisalaam.
Wadan Belgium oo Ugacan Galiyay Wadanka Faransiiska Saalax Cabdisalaam.
Posted by ONA Admin	/ April 28, 2016
Dowlada Belgium ayaa ku wareejisay wadanka Faransiiska, eedaysane Saalax Cabdisalaam oo kamid ahaa kooxdii weerarka ka gaysatay magaalada Paris dhamaadkii sanadkii lasoo dhaafay.
Saalax Cabdisalaam oo muddo bilo ah baxsad ahaa ayaa badhtamihii bishii Maarso ee lasoo dhaafay lagu qabtay guri ku yaala magaalada Brussels ee caasimada dalka Belgium. Ninkan oo u dhashay dalkaasi Belgium ayaa asal ahaan kasoo jeeda wadanka Maqrib.
Ninkan ayaa kamid ahaa dhalinyaradii ku biiray kooxda Daacish, wuxuuna kamid ahaa sida la sheegay kooxdii fulisay weerarkii bishii November ka dhacay caasimada dalka Faransiiska ee Paris ooy ku dhinteen in ka badan 130 qof.
Qorshaha ayaa ahaa inuu ninkan isku qarxiyo Stadiumka Paris, walow uusan falkaasi fulin. Ragga ku dhintay weerarkii Paris waxaa kamid ahaa nin ay walaalo ahaayeen oo isagu isqarxiyey. Saalax Cabdisalaam ayaa kadib weerarkii Paris dib ugu noqday magaaladii uu ku dhashay ee Brussels, wuxuuna halkaasi ku dhuumaaleysanayey muddo bilo ah. Dowlada Belgium ayaa sheegtay inuu sidoo kale qorsheenayey inuu weeraro kale ka geysto gudaha wadankaasi.
Kadib qabashadii Saalax Cabdisalaam ee bishii lasoo dhaafay ayey maalmo kadib koox ay saaxiibo ahaayeen weeraro ismiidaamin ah la beegsadeen Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Brussels iyo xarunta Tareenada laga raaco. Dowlada Faransiis ka ayaa horey u codsatay in loo soo gacan geliyo ninkan si ay usoo taagaan maxkamada, codsigaasi ooy dowlada Belgium aqbashay.